Ọnụ ọnụ Franchises maka ọnụahịa | Ohere Franchise | Franchiseek
Franchises dị ọnụ ala
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franchises dị ọnụ ala
Franchises Dị ọnụ ala na-apụta
Ego ọhụrụ ọnụ ọnụ Franchises
Na franchise na-agbagharị ụwa niile na ndị ọhụrụ na-abụ franchisees kwa ụbọchị ma mezuo nrọ ha, ọ nwere ike bụrụ ihe na-akụ mmụọ nye ndị klas nkịtị na-arụ ọrụ na-agbasi mbọ ike ịzụta aha iji bụrụ onye isi nke ha. Ma echegbula ebe ọ bụ na na Franchiseek anyị na-enye franchise dị ọnụ ala dị iche iche maka onye ọ bụla nwere mmasị na franchising mana enweghị ego maka ohere dị oke ọnụ karịa maka ọrịre.
Kedu ihe kpatara franchising nwere ihe ịga nke ọma dị elu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe n'ịgba azụmaahịa tupu franchising bụ ezigbo nhọrọ ebe ọ bụ na ọ na-enye gị ohere dị ịtụnanya iji bido azụmahịa nke bụrịrị ụfọdụ ihe ama ama ama dabere na nke ịzụrụ nke ga-enye gị ohere iji gbaa ọsọ. azụmaahịa na-ebughi azụmaahịa zuru oke maka na ị ga - enweta ahịa ndị ahịa ngwa ngwa ọhụụ maka aha ọhụrụ n'obodo.
Ọ nwere aha mfe iji ọsọ?
Ihe a niile dabere na ebe ị na-asụ ya niile dabere na mmadụ ahụ. Na mbu ị kwesiri ka gi na otu ndi n’eme ka ndi oru ahia nke rere ahia franchisor ihe. Ebe ọ bụ na ọtụtụ franchises nwere nkwekọrịta nke ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa iji aha ụlọ ọrụ ahụ dịka ọmụmaatụ. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye ọrụ otu ohere franchise dị ọnụ ala nwere ike rụpụtara gị nke ọma.
Mgbanye aha n'asụsụ dị mma maka akụ na ụba?
Franchising n’ime afọ ndị gara aga n’ọtụtụ mba dị iche iche egosila n’ezie inyere akụnụba ha aka site na ihe ọ bụla na-enyere akụnụba ha aka ruo n’inye ha ohere ọrụ nke na-enyere akụnụba ọ bụla aka ịba ụba nke ukwuu. Ọzọkwa anyị ga-esozi ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na gburugburu franchise anakọtara n'ọtụtụ mba iji gosipụta etu o siri nyere aka na afọ ndị gara aga.
Franchising na-etinye ego ruru UK ijeri US 17 kwa afọ.
Na UK ihe karịrị narị puku mmadụ asaa na narị puku ise na-arụ ọrụ site n'aka ndị ọrụ aha.
Franchising na USA ejirila ihe ruru nde mmadụ asatọ.
Franchising na UK bara ezigbo uru ijeri dọla 760.
Enwere ụlọ ọrụ ntanetị aha karịrị 759,200 na US.
Franchising na 2017 na Spain were ihe ruru mmadụ 200,00.
Kedu ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka ịsụgharị asụsụ.
Agbanyeghị na iji aka na-enyere ndị mmadụ aka ịchụ ahịa nke aka ha, ọ na-enye ihe ọjọọ ihe niile nke akụ na ụba na-enyere ndị nkịtị na-arụ ọrụ aka ka ha na-eme nke ọma site n'inye ha ohere ọrụ na obere ihe nwere ike ime nnukwu ihe ịga nke ọma na mba niile.
Yabụ na mgbe ị na -emepụta franchising n'ọkwa buru ibu, gịnị kpatara ị ga-eji lelee ohere dị ọnụ ala franchise dị ọnụ ala maka ịre ahịa taa na Franchiseek? Agbanyeghị na ejighi n'aka maka ịhe a na-akpọ franchise m, m na-atụ aro ka ị lelee blọọgụ anyị maka ozi mgbe niile na akụkọ na-aga nke ọma sitere na ndị otu ibe niile nọ gburugburu ụwa.